Maxkamadeynta eedeysanayaal loo heysto weerarkii Naasa-hablood 2 oo la soo gaba gabeeyay – Radio Baidoa
Maxkamadeynta eedeysanayaal loo heysto weerarkii Naasa-hablood 2 oo la soo gaba gabeeyay
By Webmaster	 On May 24, 2018
Maxkamadeynta Seddax eedeysane oo loo heysto weerarkii Al-shabaab ay ku qaadeen Hotel Naasa Hablood labo 28 October 2017 ayaa lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Muqdisho.
Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa qaaday kiiskan loo heysto eedeysanayaasha kala ah:- Fraxaan Maxammed Samatar, C/naasir Dhaqane Xasan iyo Abshir Maxamed Xaaji Buule, waxaana dhammaantood xafiiska xeer ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ku soo eedeeyeen in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday Hotel Naasa Hablood labo kadib 14 October weerarkii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhacay Soomaaliya.
Qareenada difaacayay ayaa ku dooday in la marin habaabiyay oo aysan iyaga doorashadooda kaga mid noqon Al-shabaab hasa ahaate ay jeclaan lahaayeen in loo naxariisto kol hadii ay qirsan yihiin in ay geysteen weerarkaasi dadka badani ku dhinteen.
Intii ay socotay Maxkamadeynta ayaa sidoo kale waxaa la dhageystay markhaatiyaal ay ka mid yihiin saraakiisha ciidamada amniga ee soo qabtay eedeysanayaasha iyo shacab kale.
Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa u sheegtay dhammaan dhinacyada ka qeyb galayay dhageysiga eedda in ay go’aanka Maxkamadda dib ka soo saari doonaan.
28 October sanadkii hore weerarkii lagu qaaday Naasa Hablood Labo waxaa ku dhintay 17 qof oo isugu jiro Siyaasiin xilal soo qabtay iyo kuwa kale, xildhibaan hore, Saraakiil ciidan, Haween iyo Caruur, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay 40-qof
Khayre oo Daah-furay qorshaha midaynta iyo daadejinta sugidda amniga (SAWIRRO)
Puntland oo war ka soo saartay dagaalka Tukaraq
DFS Oo Cambaareysay Qaraxyo Ka Dhacay Magaalada Baqdaad
QM Oo Sheegtay In Soomaaliya Ay Marti Galisay Qaxooti Farabadan Oo Ajaanib Ah